Banijya News | ‘बालुवाटर बसेर विकासको उद्घाटन धमाधम गर्दा जनताको जीबन स्तर बदलन सकिएन,- शक्तिबहादुर बस्नेत - Banijya News ‘बालुवाटर बसेर विकासको उद्घाटन धमाधम गर्दा जनताको जीबन स्तर बदलन सकिएन,- शक्तिबहादुर बस्नेत - Banijya News
काठमाडौं– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बालुवाटर बसेर विकासको उद्घाटन धमाधम गर्दा राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि जनताको जीबनस्थर बदलन नसकिएको बताए । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै बस्नेतले । प्रधानमन्त्रीमाथि विकासको सम्बन्धमा धेरै भ्रम रहेका कारण जनताको जीबनस्थरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ’फेसन अफ’ भएको विकासको कुरा गर्ने पुरानै रटानमा रहेको भन्दै उनले यही कारणले बालुवाटर बसेर विकासको उद्घाटन धमाधम भइरहेको आरोप लगाए। विकास निर्माण जनअपेक्षा अनुसार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा गलत समझ देखिएको बस्नेतको आरोप छ । यसका लागि सबैभन्दा प्रमुख जिम्मेवार सरकार रहेको उनले बताए।
स्थानीय तहमा अस्पताल, निर्वाचन क्षेत्रका सडकहरूमा प्रधानमन्त्रीको गलत बुझाई रहेको बस्नेतको आरोप छ । सरकारले चर्चाको लागि बालुवाटार बसेर सडकको उद्घाटन गरेर जनतालाई भ्रममा पारेको बस्नेतको टिप्पणी छ । अर्बाैं बजेट रेलका लागि छुट्टाएको तर, त्यही रेल समेत त्रिपाल ओडाएर राख्ने प्रबृद्धिले जनताको अवस्था नबदिलएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरे ।
बस्नेतले हालै वितरण गरिएको विभूषणमा नेपालको नयाँ नक्सा किन नराखिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । ‘सम्मान गर्ने निर्णय विगतमा भएको भएपनि पदक त अहिले दिएको हो नि’ उनले भने ‘अहिले यति हल्ला टिप्पणी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? मौसमी राष्ट्रवाद जनतालाई चाहिएको होइन। सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ यति हल्का टिप्पणी गरेर हुँदैन। यो तीन करोड जनताको टिप्पणी हो ।’
बस्नेतले संविधान समाप्त गर्नेदेखि अहिलेको परिर्वतनसम्मलाई समाप्त गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाट भएकोले बताए । संसद् क्रियाशील गराउन नदिई सरकारले कसरी शासन चलाउन खोजेको भनि बस्नेतले प्रश्न गरे ।
‘संसद्भित्र र बाहिर धेरै दिनदेखि संसद्को प्रभावकारिता र विकासको बारेमा छलफल चलेको छ । चुच्चे नक्साका बारेमा पनि छलफल भएको छ’ उनले भने ‘तर, सरकार आत्मरतिमा रमाएर बसेको छ । अध्यादेशबाट सरकार चलाउने र बालुवाटारबाट चलाउने मनसाय देखिएको छ ।’
माओवादीले सरकारलाई दिएको सर्मथन छिटो फिर्ता लगोस् भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै उनले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको सहयोगका लागि कायम नराखको स्पष्ट पारे । ‘यो जनमतबाट बनेको संसद्लाई असंवैधानिक रूपमा अत्य गर्ने काम सरकारबाट भएकाले यसको रक्षाका लागि सरकारको सर्मथन कामय राखेका हौं’ उनले भने ‘हामी सबै सरकारले गरेका गलत कामको साक्षी बस्दै ल्याप्चे लगाएर बसेका छैनौं ।’
सरकारलाई संसद् मन नपरेको हो ? भन्दै उनले संसद्लाई ’शो पिस’ बनाएर अर्को व्यवस्था चलाउन खोजिरहेको आशंका गरे । समस्याको शुरुआत कहाँबाट भयो त्यसको खोजी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वमन्त्री बस्नेतको आग्रह छ । ‘सरकारका केही मन्त्री प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन । यो नबुझेर गरेको होइन’ बस्नेतले थपे ‘संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो अनि, सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि सत्तामा टाँसिएर बस्नु प्रतिगमन हो ।’
संविधानमार्फत् मौलिक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गरिएको र अदालतले पनि यो मौलिक हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा चालिएको कदम प्रतिगामी नै भएको बस्नेतको टिप्पणी छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्र संसद् भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरा अदालतले पनि स्वीकार गरेको छ’ उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले यसमाथि प्रहार गर्नुभयो । यही हो प्रतिगमन भनेको । संविधानको मूल्य र प्रगतीशिल मान्यतामाथि जब हमला हुन्छ, अनि प्रतिगमन शुरु हुन्छ ।’